DEG DEG:- Golaha wasiirada cusub magacyadda iyo xilalka loo magacaabay oo dhameystiran (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Golaha wasiirada cusub magacyadda iyo xilalka loo magacaabay oo dhameystiran (AKHRISO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre aaya daqiiqado kahor ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada cusub oo ka kooban illaa 26 wasaaradood, hal ra’iisul wasaare ku-xigeen, 26 wasiir ku-xigeeno iyo 15 wasiiru dowlayaal.
Golaha wasiirada cusub oo la sheegayo inay ku jiraan haween aad u badan ayaa waxaa xafladda ku dhawaaqistooda lagu casuumay madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, wasiiro hore, xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka iyo marti sharaf kale.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo saxaafadda la hadlay kadib markii uu ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada cusub ayaa soo bandhigay qodobo dhowr ah oo cusub oo lagu xisaabtamaayo wasiirada cusub ee xilka loo magacaabay oo ay ka mid yihiin in hantidooda la xisaabiyo iyo xisaabtan joogto ah.
Wasaarad cusub oo loogu magac daray gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa lagu daray golaha wasaarida cusub, si wax looga qabto xaaladda abaaraha dalka ee soo noq-noqday.
Golaha wasiirada cusub ee la magacaabay oo la sheegayo inay u badan yihiin xubno cusub, ayaa sidoo kale ku jira siyaasin hore xilal kala duwan u soo qabtay.
Dhawaan ayaa la filayaa in golaha wasiirada cusub la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya, si loo ansixiyo, iyadoo ay hor-yaalaan arrima badan oo u baahan wax ka qabasho.
Hoos ka aqriso liiska golaha wasiirada iyo shaqsiyaadka la magacaabay
We’ll work with state agencies to ensure peaceful polls, Saleh warns politicians